रुपन्देहीमा शनिबार सहकारीका गतिबिधी के-के भए ? हेराै‌ एकैठाँउ-Nagarikaawaj.com
रुपन्देहीमा शनिबार सहकारीका गतिबिधी के-के भए ? हेराै‌ एकैठाँउ
आवाज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि बुटवलकाे नवौ वार्षिक साधारणसभा तथा चौथो अधिवेशन नया नेतृत्व गर्दे सनिवार सम्पन्न भएको छ ।
अधिवेशनको एक कार्यक्रम विच भूमि व्यवस्था, कृषी तथा सहकारी मन्त्रि आरती पौडेलले उद्घाटन गर्दे सहकारीलाई उत्पादनसंग जोड्नु पर्ने बताईन । उनले सहकारी मार्फत कृषीको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गर्न सम्भव रहेको बताउदै त्यस तर्फ सहकारीले ध्यान दिनु पर्ने बताईन ।
त्यसैगरी प्रदेश सांसद चेतनारायण आचार्यले सहकारीहरु बचत तथा ऋण परिचालनमा मात्र सिमित नभएर सहकार्य गरी आर्थिक संवृद्धिको वाटोमा काम गर्न सुझाव दिउ ।
संस्था लिका अध्यक्ष वावुराम वन्जाडेको अध्यक्षता, संस्थापक अध्यक्ष तुल्सी प्रसाद आचार्यको स्वागत तथा सचिव वालकृष्ण पाण्डेको संचालनमा भएको कार्यक्रममा जिल्ला सहकारी डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीका पुर्व प्रमुख नेत्र प्रसाद घिमिरे, सगरमाथा वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष टेक वहादुर थापा, निर्वाचन समितिका संयोजक केशव चौधरी निर्वाचन अधिकृत खुवीराम आचार्य, मनिराम कडmे लगायतले शुभकामना मन्तव्य ब्यक्त गरेका थिए ।
सो अवसरमा उतकृष्ट सहकारी पत्रकारिता पुरस्कारबाट पत्रकार डि आर वन्जाडे, संस्थापक अध्यक्ष तुल्सी प्रसाद आचार्य, सहकारीको प्रकाशन आवाज ज्ञानमालाका सम्पादक रुद्रलाल कुंवर लगायतलाई सम्मान गरिएको थियो । अधिवेशनले पुन वाबुराम वन्जाडेको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय संचालक समिति निर्वाचित गरेको छ ।
जसको उपाध्यक्षमा उपाध्यक्षमा जीवन प्रसाद अधिकारी, सचिवमा बालकृष्ण पाण्डे, कोषाध्यक्षमा अच्युत पन्थ निर्विरोध निर्वाचत भएका छन ।
त्यसैगरी सदस्यहरुमा तुल्सी प्रसाद आचार्य, रुद्रलाल कुंवर, विष्णु प्रसाद न्यौपाने, गोकुल कडेल, स्वरोज कुमार जयसवाल, मिनराज भूसाल र गिता बन्जाडे निर्वरोध निर्वाचित भएका छन ।
त्यसै गरी लेखा समिति संयोजकमा दलवहादुर राना, सदस्यमा नारायण पन्थी र लक्ष्मण पन्थी निर्विरोध निर्वाचित भएका निर्वाचन अधिकृत खुवीराम आचार्यले बताए ।
महिला शसक्तिकरणकालागि समुहमा लगानी गर्ने रणनीति :
बुटवलमा सञ्चालित शुभलाभ वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले महिला उद्यमशिलता बिकासकालागि महिलालाई समुहमा लगानी गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ ।
उक्त सहकारी संस्थाको शनिबार बुटवलमा सम्पन्न १० औं वार्षिक साधारण सभाले महिला ससक्तिकरणकालागि महिलालाई समुहमा लगानी गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको संस्थाका अध्यक्ष सुनिल मरासिनीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सहकारी सिद्धान्त अनुसार सहकारीको नियम र परिधिभित्र रहेर लगानी गरिने छ ।
साधारण सभाले शेयर सदस्यको मृत्यु भएमा दिईँदै आएको राहत रकममा बृद्धि गरि ५ हजारबाट १० हजार पु¥याएको छ ।
यस अंगाडीसम्म शेयर सदस्यको मुत्यु भएमा परिवारलाई राहत स्वरुप ५ हजार रुपैंया प्रदान गर्दै आएको थियो भने अवका दिनदेखि शेयर सदस्यको मृत्यु भएमा परिहवारलाई १० हजार रुपैंया प्रदान गरिने छ । त्यस्तै सहकारी संस्थामा रहेका शेयर सदस्यको २ लाख बराबरको दुर्घटना विमा गर्ने निर्णय गरेको छ । सहकारीमा शेयर सदस्य बृद्धि गर्न पनि साधारण सभाले अख्तियारी प्रदान गरेको छ ।
१० औं साधारण सभाको अवसरमा शेयर सदस्य रहेका दुई जना जेष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरिएको छ । त्यस्तै गत एसईई परिक्षामा उत्कृष्ट भएका ५ जना शेयर सदस्यका छोराछोरीलाई सम्मान गरिएको छ । आगामी वर्षदेखि एसईई परिक्षामा उत्तिर्ण हुने सबै शेयर सदस्यका छोराछोरीलाई सम्मान गर्ने साधारण सभाले निर्णय गरेको छ ।
साधारण सभामा अध्यक्ष सुनिल मरासिनीले प्रस्तुत गरेको वार्षिक प्रतिवेदन तथा कोषाध्यक्ष ज्ञानबहादुर पुनले प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रतिवेदन पारित भएको छ ।
सधारण सभामा सल्लाहकार अमृतलाल श्रेष्ठ, बाबुकाजि शाक्य, शेयर सदस्यहरु रमेश बस्याल, चुरामणी पन्थी लगायतले सुझाव सहित सुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो । संस्थाका उपाध्यक्ष लालकाजि राजभण्डारीको स्वागतमा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव बसन्तराज जोशीले गर्नुभएको थियो ।
कानूङ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाकाे स्वास्थ्य परिक्षण
कानूङ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.बुटवल–६,रुपन्देहीको आयोजनामा आज अमर भवनमा स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
वार्षिकोत्सवको अवसरमा सहकारीले शेयर सदस्यका परिवारलाई स्वास्थ्य परिक्षण गरिएको हो ।स्वास्थ्य परिक्षणमा तीन सय पचास जना शेयर सदस्यका परिवारले स्वास्थ्य जांच गराएका
अध्यक्ष टोपबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा स्त्री रोग,थाइराइड,पाठेघर रोग सम्बन्धि परिक्षण गरिएको थियो ।कार्यक्रममा स्त्री
रोग विषेशज्ञ (गाइनोलोजिष्ट)डा.सभना प्रधानले परिक्षण गर्नुभएको थियो ।एशियन डाइनोष्टिक ल्याब्रोरेटरी प्रा.लि.को व्यवस्थापनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
यसअघि एक कार्यक्रमबीच बिरामीको परिक्षण गरेर डा.प्रधानले स्वास्थ्य परिक्षणको उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।सहकारीका अध्यक्ष टोपबहादुर थापाको अध्यक्षता,सचिव हरिदेब थापाको सञ्चालन तथा सदस्य बेनबहादुर थापाको स्वागतमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा सहकारीका निवर्तमान अध्यक्ष जंगबहादुर
थापा,ठाकुर राना,लालबहादुर थापा,लक्ष्मण थापा लगायतले बोल्नुभएको थियो ।
रुपन्देहीको देवदहमा रहेको नवप्रभात महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको एघारौ बार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ ।
साधारण सभाले महिलाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम विस्तार र महिला सीपमुलक तालिम ब्यवस्थापन गर्ने लगायतका प्रस्तावलाई पारित गरेको छ । संस्थाका अध्यक्ष निर्मला अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा देवदह नगरपालिकाका उपप्रमुख विद्यालक्ष्मी गुरुङ्गले महिलाको अवस्थामा सुधार भएमात्र मुलुक समृद्ध हुने बताउनुभयो ।
उहाँले महिलाको अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि सीपमुलक तथा आयमुलक कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यमा सहकारीले खेलेको भुमिका महत्वपुर्ण रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा जिल्ला सहकारी संघका सचिव टिका न्यौपाने, पल्लवी साकोसका अध्यक्ष दिवाकर अधिकारी, कोलिय साकोसका उपाध्यक्ष खिमानन्द ज्ञवाली, निर्माण बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका सचिव प्रकाश अर्याल, साना किशान सहकारी संस्थाका ब्यवस्थापक सरला सुवेदी, मायादेवी सहकारीका देवु भण्डारी, सस्ंथाका पुर्व अध्यक्ष मिना श्रेष्ठ लगायतले आआफ्ना भनाई राख्नु भएको थियो ।
संस्थाका सचिव भगवती शर्माको संचालनमा भएको कार्यक्रममा कोषाध्यक्ष मिना पाण्डेको अर्थिक तथा अध्यक्ष निर्मला अधिकारीको वार्षिक प्रतिवेदन साधारण सभाले पारित गरेको छ ।
सो कार्यक्रमको अवसर पारी संस्थाका पुराना सदस्य, बचतकर्ता तथा एसईइ परिक्षामा उत्कृष्ठ नतिजा ल्याउने शेयर सदस्यका छोराछोरीहरुलाई सम्मान गरिएको थियो ।
ढकिया कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको पाँचौ वार्षिक साधारणसभा
बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ सेमलार स्थित ढकिया कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको पाँचौ वार्षिक साधारण सभा शनिबार सम्पन्न भएको छ ।
संस्थाका अध्यक्ष बीर बहादुर थापाको अध्यक्षता तथा बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ का वडाअध्यक्ष डम्बर बहादुर भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम भएको हो ।सो अवसरमा बोल्दै भण्डारीले सेमलारका सबै सहकारी उत्कृष्ट बन्दै गएकोमा प्रशंसा ब्यक्त गरे ।
उनले सहकारीले कृषितर्फ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने र तालिम थोरै व्यक्तिलाई दिने तर व्यवहारिक र व्यवसायिक तालिमलाई बढी जोड दिनु पर्नेमा औल्याए ।
सहकारीहरुको दीगो विकास र लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारीका शेयर सदस्यहरुलाई मनोरञ्जन र विलासिताको काममा खर्च कम गर्ने, बचतलाई बढाउनु पर्ने सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा भद्रकाली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. सेमलारका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भूसाल, प्रयास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. तामनगरका अध्यक्ष सूर्य बहादुर राना, लोक छाहरी सामाजिक उद्यमी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. सेमलारका रमा खड्का, जन विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. सेमलारका उपाध्यक्ष नारायण पौडेल, संस्थाका सल्लाहकारहरु जय बहादुर छन्त्याल, वेद प्रकाश श्रीस, विरबल प्रसाद चौधरी, युवराज सारुमगर तथा लेखा संयोजक पदम बहादुर खाम्चा लगायतले बोलेका थिए ।साधारण सभामा कोषाध्यक्ष यमकला पल्लीद्धारा प्रस्तुत कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन तथा आन्तरिक लेखा किसन पुनद्धारा प्रस्तुत लेखा प्रतिवेदन अनुमोदन गरेको थियो ।
उपाध्यक्ष गन बहादुर रानाको स्वागत तथा कार्यक्रमको सञ्चालन संस्थाका सचिव आसा थापाले गरेकी थिइन् ।
ऊ नमः बचत तथा ऋण सहकारीकाे दोश्रो वार्षिक साधारणसभा
ऊ नमः बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड कञ्चन गाउपालिका , रुपन्देहीको दोश्रो वार्षिक साधारण सभा बुटवलमा सम्पन्न गरेको छ ।
कार्यक्रममा श्रम कार्यलय रुपन्देहीका अधिकृत रोमलाल पुरी र विद्यालय निरिक्षक सुदिप गिरीको आथित्यता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै अतिथिहरुले संस्थाले अहिले सम्म वहन गरेको कार्यहरु महत्वपूर्ण रहेको भन्दै संस्थाको बृहत्तर बिकासको लागि अझ नया योजनाहरु आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष तथा सभाका अध्यक्षले खिमलाल पुरीले संस्थाको बार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने संस्थाको आर्थिक गतिविधि वारे लेखा संयोजक लालमणि पुरीले जानकारी गराउनुभयोे ।
कार्यक्रममा उपाध्यक्ष ज्ञानुराम भण्डारीको स्वागत र सदस्य दिपक पुरीको संञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।
यता दूरगामी बचत तथा क्रृण सहकारी संस्था लिमिटेड तिलोत्तमा ३ को आठौं साधारणसभा सम्पन्न भएको अध्यक्ष रामबहादुर थापा क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो ।
कालिगन्डकीको आठौँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न
कालिगन्डकीको वचत तथा ऋण सहकारी संस्था तिलोत्तमा ३ को आठौँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ ।
सहकारीको साधारण सभाको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण प्रसाद सापकोटाले सहकारीको माध्यमबाट नै आर्थिक उन्नति हुन सक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले तिलोत्तमा नगरपालिका भित्र रहेका संघ संस्थाहरु संग सहकार्य गरी तिलोत्तमाको उन्नतिका लागि नगरपालिका सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले सहकारीको सवल नेतृत्वबाट आफू प्रभावित भएको भन्दै शेयर सदस्यको रुपमा कालिगन्डकीमा बचतको सुरुवात गर्ने समेत उद्घोष गर्नुभयो ।
त्यस्तै सहकारीका सल्लाहाकार तुल्सी प्रसाद सापकोटाले सहकारीलाई बहुमुखी सहकारीका रुपमा स्थर उन्नती गर्ने लक्ष्यका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सहकारीका अध्यक्ष यज्ञ प्रसाद सापकोटाको अध्यक्षतामा भएको साधारण सभामा सल्लाहाकार बाबुराम अधिकारी, सेयर सदस्य गिता देवी न्यौपाने, लोकनाथ भूषाललगाएतले बोल्नुभएको थियो ।
साधारण सभाकै अवसरमा एसइइमा उत्कृष्ठ उने शेयर सदस्यका छोरा छोरी, धेरै सयर सदस्य बनाउने सदस्य, रत्तदान गर्ने व्यत्तिहरु तथा पत्रकार समेत लाई सम्मान गरिएको थियो ।
साधारण सभाले अध्यक्ष सापकोटाको अध्यक्षीय प्रतिवेदन, कोषध्यक्ष टंक तिवारीको आर्थिक प्रतिवेदन तथा लेखा संयोजक दिपक लामिछानेको लेखा प्रतिवेदन सर्वसम्मतले पारित गरेको छ ।